Nemazvo machine Parts, CNC Parts, nemazvo Kupedza Parts - Wasser
Professional kugadzirwa yakanaka machine uye lathe maching kubudiswa nokuda ose nezvinhu, kusanganisira Aluminum, Brass, Iron nezvimwewo; CNC zvakarurama nhengo kubudiswa uye kugadzirwa.
Wasser TEK KUSATSIGIRWA akanga establised pa 2007 iyo riri pana Yuhang DIST. Hangzhou guta sezvo anozivikanwa yepasi paradhiso. We vanozviitira kupa pevane zvigadzirwa, ano rutsigiro uye zvakakwana pashure-sale basa. Main zvigadzirwa: wakanaka machine uye lathe maching kubudiswa nokuda ose nezvinhu, kusanganisira Aluminum, Brass, Iron nezvimwewo; CNC zvakarurama nhengo kubudiswa uye kugadzirwa.
The kambani yemhando kugadzirwa zvokushandisa, nyanzvi hwokugadzira vashandi uye kunyatsoomerera yepamusoro kutarisirwa hurongwa, maererano nheyo yakanaka nerutendo Kutarisira, yepamusoro uye zvakanaka mutengo musimboti kupa vatengi basa zvakakwana. Kuti sika chaiko vatengi ndicho chinangwa tagara vakatevera. Tinonyatsobvuma kuti chete takunda-zvisamumirira ndiyo kukura achitungamirirwa vachida. Tichaita, sezvo nguva dzose, kubereka unhu hwakanaka zvigadzirwa zvichinyatso enderana zvinodiwa vatengi edu kuitira kudzokera rutsigiro uye kuvimba makasitoma edu.
Nemazvo machine psac Parts
CNC nemazvo machine
Rich hwokugadzira ruzivo
Strong kugadzirwa inokwana pakugadzira zvinhu, pamwe-refu kuunganidza unyanzvi ruzivo, pamwe kutsvaka nounyanzvi uhwu, kupa vatengi vane zvinhu uye mabasa.
Professional kugadzirwa uye kubudiswa aruminiyamu, mhangura, simbi uye nezvimwe zvinhu kubudiswa, CNC okugadziridza kubudiswa, vatengi vazhinji vanoonga uye kuzivikanwa.
Ita Even More
Kugovera Quality Products, Excellent Service, yemakwikwi Prices uye Kukurumidza Delivery. zvigadzirwa yedu vari kutengesa zvakanaka zvose mumhuri uye kumisika. boka redu riri kuedza kuva munhu bhizimisi zvinokosha China.
Vaka Your Mould Machine
Tinotarisira kunzwa kubva kwamuri, kana muri mutengi kudzoka kana chitsva. Tinovimba muchawana zvauri kutsvaga pano, kana kwete, tapota nyorera isu pakarepo. We Kuzvikudza pachedu pamusoro notch vatengi norudaviro uye. Ndinokutendai nokuti mabhizimisi uye rutsigiro yenyu!
Adress: Yuhang DIST, Hangzhou guta
cNC machine Parts , nemazvo Processing Parts , Precise Machining Parts, Machining Parts, nemazvo Heat Treatment Process Parts , cNC machine psac Parts ,